महन्थ ठाकुर पक्षकै शरणमा जाने उपेन्द्र यादव र बाबुरामको संकेत !Nepalpana - Nepal's Digital Online
बुधवार, आषाढ २ गते २०७८
२०७८, आषाढ २ गते
# ५ पूर्वप्रधानमन्त्री
नेपालपाना जेठ १ २०७८
काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष यतिबेला तनाबमा छ ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षसहित शुक्रबार बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । बहुमत सदस्यले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि आज अध्यक्ष यादव र डा. भट्टरार्ईपक्षको बैठक बसेको थियो ।
यादव र भट्टराई पक्षले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय दलको कुनै पनि बैठक नबसेको दाबी गर्दै संसदीय दलको नेता चयन नगरेको बताएको छ ।
यद्यपी, बहुमत सदस्यले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि यो समुहलाई तनाब भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा जसपाभित्र दुई धार देखिएको थियो। महन्थ पक्ष का १५ जनाले ओलीलाई विश्वासको मत तटस्थ बसेका भने अन्य सांसद त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए।
दुई पक्षबीच विवाद तीव्र बन्दा पार्टीका बैठक पनि छुट्टा छुट्टै बस्न थालेका छन्। यस्तोमा बहुमत सांसद ठाकुरपक्षसँग हुँदा यादव र भट्टराई संकटमा पर्नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यसोहुँदा यात यो पक्ष महन्थ ठाकुरसमुहबाट अलग हुनुपर्ने या ठाकुरपक्षसँगै मिल्नु पर्ने स्थिती बन्ने संकेत देखिएको छ ।
जेठ १, २०७८ शनिवार १९:४७:५८ बजे : प्रकाशित
उपेन्द्र यादवले अवैधानिक हर्कत गरेपछि ठाकुर पक्षलाई निर्वाचन आयोगको शुभ संकेत !
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काम अघि बढ्यो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले दिए यस्तो निर्देशन !
बाबुराम पनि पुगे कोटेश्वरमा, माधव नेपालमाथि 'जादु-टुना' चलाउँदै विपक्षी नेताहरू !
छिटोछरितो काम गर्न समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारीलाई मन्त्री चौधरीको कडा निर्देशन !
कोरोना भाइरस चीनको ल्याबबाट ‘लिक’ भएकाे बिषयमा बाेले बेलायती प्रधानमन्त्री
विपद्मा खटिन केन्द्रको आदेश पर्खनु पर्दैन : सेना
बाइडेन र पुटिनबीच जेनेभामा भेटवार्ता !
विकासको सुचांकमा पाकिस्तान पछि परेको रिपोर्ट